Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-piainana taloha momba an'i Louise Vanderbilt | Wayne Peterson-Fanahy na tari-dalana ara-panahy ao amin'ny tranga iray ao amin'ny sehatry ny fanambadiana indray miaraka amin'ny Psychokenisis - Fikarohana momba ny vatana
Ahoana no nahatonga izany? Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany ary Fanahy Tari-dalana
Little Wayne dia mahatsiaro ny fiainam-piainana taloha niaraka tamin'ny vehivavy tao amin'ny akanjo lava sy ny lehilahy iray antsoina hoe Fred: Fahitana ny fiainana an-davan'andro tao an-tranon'ny Vanderbilt
Wayne Peterson dia nahatsapa fahatsiarovana ny fiainany taloha izay nisy azy Louise Vanderbilt, vady Frederick Vanderbilt, mpikambana iray avy amin'ny tontolon'ny Amerikana Vanderbilt. Tamin'ny alalan'ny fanambadiana, dia havany i Louise Gloria Vanderbilt, izay renin'ny CNN Anderson Cooper. Tsindrio eo amin'ny sary fampitahana tarehy mba hanitarana azy ireo.
Mifanohitra amin'ny fahatsiarovan'ny fahazazany momba azy Francesco Foscari lasa, ny fahatsiarovan'i Wayne ny androm-piainan'i Vanderbilt dia mivantana sy hita maso kokoa. Mitantara ny fihodinan'ny hetsika i Wayne:
"Ny fahatsiarovako voalohany tamin'ny fahazazako dia nahitana sary tamin'ny antsipiriany tamin'ny fotoana nandalovan'ny vehivavy ny akanjo lava ary ny olona dia mbola nampiasa kalesy nitaingina soavaly. Tsaroako manokana ny trano lehibe vato iray, lehilahy iray antsoina hoe Fred, namana tonga mankany amin'ny fiaraha-mientana sosialy, toerana lehibe iray misy rindrina avo sy rihana vato fotsy.
Tao anatin'izany rehetra izany dia tsaroako ny ankamaroan'ny vehivavy iray izay ivon'ny hetsika mifandraika amin'izany. Ilay ramatoa mistery dia ivon'ny sehatra maro izay niverimberina imbetsaka nandritra ny taona maromaro indrindra ary nitohy hatramin'izao. Nanontany tena aho hoe iza ireo olona ireo ary nanontany tena ny antony nahitan'izy ireo ahy tena marina.
Raha mbola kely dia nino aho fa anisan'ireo fiainako ankehitriny ireo olona ireo. Nahoana izy ireo no tsy nitsidika ny tranonay ka tsy afaka nanazava velively. Tena nino aho fa ho tonga indray andro any izy ireo ary hahatsiaro ahy sy tsy hay fantarina izy ireo, ho sambatra aho. Nieritreritra aho fa tamin'ny fahatanorako fony aho zazakely dia efa niaina ireny olona ireny niaraka tamin'ny ray aman-dreniko aho ary efa nanadino ny ankamaroan'ireo traikefa niainana ireo. Io no hany fomba nananako zaza raha hanazava ny hatsaran'ireo olona notsidihiko ireo tamin'ny nofiko. Na dia izany aza, ireo olona ireo dia tsy niseho mihitsy tamin'ity fiainana ankehitriny ity ary nitazona ahy ny fahaverezako hanazava ny fisehoany ao an-tsaiko. Tsy nahalala momba ny vatana vaovao indray aho tamin'ny mbola kely. "
Wayne, izay teraka tamin'ny 1942, dia mampiseho fa ireo fahatsiarovana ireo dia hafahafa indrindra hatramin'ny taona 1940, tsy nisy fahitalavitra, na nahita sary mihetsika, izay mety nahatonga ny fisainany. Ahitana taratra fa tsy nisy zavatra nifanaraka tamin'ny fahitany tamin'ny zava-niainany tamin'ny fotoana niainany tamina tanàna kely iray tao afovoan'i Wisconsin. Ny fitafiana, trano ary fomba fanao ara-tsosialy dia samy hafa tanteraka tany Wisconsin noho ny zavatra niainany tao an-tsainy.
Nefa lehilahy iray antsoina hoe Fred, vehivavy izay vehivavy manao akanjo lava nitaingina soavaly voasambotra sy trano lehibe sandstone, dia tena zava-doza tokoa ho an'i Wayne kely. Very hevitra i Wayne nanontany ny reniny mikasika ireo olona ireo sy ny trano izay tsaroany. Nanontany izy raha efa nentina tany amin'ny toerana toy ny zazakely. Valiny foana ny valiny. Na dia tsy afaka nanazava ny loharanon'ny fahatsiarovany aza izy, dia mbola loharanon-kafaliana ireo fahatsiarovana ireo, ary nitazona fihetseham-po nostalgic ho an'ny olona iray antsoina hoe Fred.
Tavoahangy efa ela teo amin'ny fahadimy avaratr'i New York City teo anoloan'ny trano Vanderbilt taloha
Tamin 'ny adolesque vao herotrerony, dia nanatevin-daharana ny Peace Corps i Wayne Peterson ary nandeha ho any Brezila. Ny diany tany Rio de Janeiro dia tany New York City. Hatramin'i Wayne mbola tsy tany amin'io tanàna goavana io talohan'izay, nandamina andro vitsivitsy tany New York izy, mba haka ny toeran'ny Big Apple. Tamin'ny andro faharoa nataony tao NYC, tamin'ny mitataovovonana, dia nandalo ny Fifth Avenue i Wayne. Gaga izy noho ny faharatsian'ny olona. Andeha isika izao hamela an'i Wayne hamoaka ilay sehatra, raha nijoro teo amin'ny sisin-dàlan'ny Fifth Avenue izy:
“Nisy vehivavy nisaron-doha sy fonon-tànana fotsy niampita ny sisin-dalana malalaka nanofahofa tanana nanatona ahy ary niantsoantso hoe: 'Louise, Louise, eto aho, ity aho.' Nikiakiaka hatrany i Louise dia nangatsiaka aho. Nino avy hatrany aho fa niantso ahy izy. Na inona na inona antony dia nino tampoka aho fa izaho Louise.
Ny fifantohako rehetra dia nifantoka tamin'ity vehivavy hafahafa ity izay nandehandeha teny amin'ny làlako tamin'ny alalan'ny vahoaka. Tao an-tsaiko dia olon-kafa aho, olona iray antsoina hoe Louise. Nino aho fa ilay vehivavy nibanjina ahy dia namana efa ela, saingy ny tarehimarika dia tsy nahazatra azy.
Na izany aza dia nisy fanamaivanana lehibe tao an-tsaiko, noheveriko fa farany dia nisy olona nahafantatra ny tena amiko. Tsy ilay tovolahy avy any Wisconsin, fa vehivavy iray antsoina hoe Louise. Toy ny hoe niharan'ny amnesia aho ary tampoka dia nisy olona nanafintohina ahy ho zava-misy. Indrisy, ny fotoana fientanam-pihetseham-po lalina dia nandalo ny vehivavy tao anaty satroka sy ny fonon-tanana izay niboridana nandalo ahy ary naka vehivavy zokiolona nijoro teo anilako.
Teo no ho eo, ny saiko be loatra ary tsy afaka nihetsika na nieritreritra aho. Mbola nanana fotoana kely aho rehefa nijery ireo vehivavy roa ireo izahay sy Louise ary nieritreritra, ianareo adala, maninona no tsy tadidinao aho? Izaho no tena Louis. Hafiriana aho no nijoro sy nibanjina an'ireo vehivavy roa nankafy ny olom-pantatra fanavaozana tsy haiko, nefa nony farany dia niverina ny saiko lojika ary noterena hanontany ny fihetsiko sy ny fisainako aho.
Menatra sy very hevitra aho, niverina tao amin'ny efitranoko. Tao amin'ny trano fandraisam-bahiny aho dia nilamindamina teo am-pandriana ary nandritra ny ora maro no nisaintsainako ny zava-nitranga. Fa maninona aho no nanontany tena foana hoe, nieritreritra ve aho fa i Louise? Fa maninona no tena marina tamiko sy tena zava-dehibe ny maha-Louise ahy? Nisaintsaina an'io zavatra hafahafa hafahafa io nandritra ny fotoana nijanonako tany New York aho, saingy tsy nahita valiny raha tsy taona maro taty aoriana. Na izany aza, afa-po aho fa izaho dia Louise tamin'ny fiainako lasa teo amin'ny faramparan'ny taonjato ary vadiko i Fred. ”
Wayne dia mahatsapa fahasosorana taloha amin'ny fiainana noho ny fahasosoran'i Fred
"Ny fantatro momba an'i Louise sy i Fred dia tsy fahitana vitsivitsy fotsiny tamin'ity fiainana taloha ity, fa nahatsapa fihetsem-po avy tamin'i Louise ihany koa aho. Fantatro tsara fa diso fanantenana tamin'i Frederick izy matetika tamin'ny hetsika ara-tsosialy. Louise dia ho eo amin'ny faritra fandraisana lehibe ao an-trano miarahaba ny vahiny. Nanao akanjo maromaro aho izay tadidiko tsara tamin'ny an-tsipiriany. Nataoko sary an-tsaina foana i Fred tamin'ny fehiloha fotsy sy palitao misy rambony. Toa nahazo aina tsara izy tamin'ny fitafiana tamin'io akanjo io. fa isaky ny azo atao dia nandositra tany amin'ny birao / tranomboky kely izy. Tadidiko tsara ny varavaran'ny tranomboky. Ao anaty trano famakiam-boky dia hangina ary i Fred dia hipetraka amin'ny seza avo misy lamosina manafina azy tsy ho hitan'ny olona eo am-baravarana. Reraka i Louise tamin'ny farany, tamin'ny fialantsiny natao tamin'ireo vahiny momba ny tsy fahatongavan'i Fred. ”
Wayne dia manondro ny fahafatesany taloha momba ny Fiainam-pianakaviana Vanderbilt
Amin'ireny fiainana taloha ireny dia nisy fahatsiarovana niainana fony izy mbola tanora, Wayne Peterson mbola tsy nahalala hoe iza manokana i Fred sy Louise. Am-polony taona maro taty aoriana, tamin'ny taona 1990, dia nisy tsimbadika rehefa nitsidika namana ambony iray tany New York City i Wayne, Mary no anarany. Ity namana ambony ity dia nanitrikitrika fa niaraka taminy nanao vakansy tao amin'ny tranony Irlandy any amin'ny morontsiraka atsimon'i Irlandy i Wayne. Nilaza i Mary fa hanana fotoana mahafinaritra ry zareo ary nanampy koa fa hiaraka amin'izy ireo koa ny namany Gloria.
Nanontany i Wayne hoe: "Gloria iza?" Namaly i Mary hoe: "Ny namako Gloria Vanderbilt." Avelao i Wayne hamaritra ny fihetsiny manoloana an'io fanambarana io momba an'i Gloria Vanderbilt, izay atolotra ankavanana ny sariny:
"Avy hatrany dia lasa malemy indray ny eritreritro, toy ny tamin'ny taona lasa teo tany New York City fa niantsoantso ny anaran'i Louise ny vehivavy zokiolona. Ny toetra iray hafa na ny maha-izy azy iray hafa dia naka ny fahatsiarovako ary nilaza aho hoe: 'Tena, Gloria sy izaho dia afaka mifampiresaka sy mifosafosa momba ny fianakavianay.'
Nisy fahanginana avy amin'i Maria namako ary nanomboka nahatsapa ny zavatra nataoko aho. Nanontany ny dikan'ny fianakaviako havako i Mary ary nanahirana ahy tamin'ny zavatra iray nandritra ny fiezahako hisaintsaina fialantsiny tsara ho an'ny fanambarako mahatsikaiky.
Nanazava aho tamin'ny farany fa nieritreritra aho fa manana hazon-kazo mahaliana i Gloria. Taorian'ny famaranana an'io resaka io dia tsapako fa vetivety dia nafindra tany amin'ny fiainana hafa aho. Tena feno izany fa tena nino aho fa havan'i Gloria Vanderbilt ary afaka nifosa momba ny mpianakavy tokoa izahay. Ary manontany tena foana aho hoe, maninona aho no nilaza toy izany tamin'ny fahatokisan-tena toy izany? ”
Fanahy, fitarihana ara-panahy na fanahy: boky mihetsika amin'ny fomba mahagaga ary mifikitra amin'ny raharaha psychokinesis an'i Wayne.
“Nandritra ireo andro taorian'ilay resaka nifanaovako tamin'i Mary dia nanomboka nanontany tena aho hoe mety hisy ve i Frederick sy Louise Vanderbilt. Tsia, nino aho fa ny elanelana manohitra izany dia lavitra loatra ka tsy manelingelina ny fizahana. Na eo aza izany, herinandro vitsivitsy taty aoriana raha nirenireny tany amin'ny fivarotam-boky tiako indrindra aho dia nahasarika ny saiko ny boky iray momba ireo fianakaviana manankarena tamin'ny taona 1800 sy tany am-piandohan'ny taona 1900. Tsy hitako afa-tsy ilay boky satria teo amin'ny talantalana ambany indrindra izy io ary nivoaka teo amin'ny lalantsara 4 ka hatramin'ny 5 santimetatra teo ho eo.
Na dia nanosika imbetsaka tamin'ny tongotro imbetsaka ilay boky dia nitohy imbetsaka ny boky vao navoakako ary namaky ny fonony. Nandinika ny tanako mihitsy aza aho ary nandohalika ny zavatra tao amin'ny talantalana izay nanery ny boky ho any amin'ny nosy. Tsy nisy afa-tsy tany efitra tao ambadiky ny boky.
Nahaliana ahy izany, ka nojereko vetivety ny vidin'ilay boky, izay lafo, ary te hamerina azy eo ambony talantalana avy hatrany aho. Na inona na inona antony, tsy azoko natao ny namela ilay boky na dia te-hamerina azy io eo ambony talantalana aza ny saiko. Satria tsy azoko ny tanako namoaka ilay boky, dia nanjohy hevitra aho fa tsy maintsy mividy azy mba hialana amin'ilay fivarotana. Rehefa nanandrana nanolotra ilay boky tamin'ny mpanambola aho mba hahafahany manao ny varotra, dia tsy maintsy nisintona tamin'ny tanany roa ilay mpitambola mba hanesorany ilay boky tao an-tanako, na teo aza ny faniriako hamela azy. Rehefa avy nandoa ilay boky aho dia tezitra tamin'ny tenako satria tsy nahafehy tena tamin'ny fividianana boky tsy tiako. Nentiko nody ilay boky ary napetrako teo am-baravarako manokana ary nihevitra aho fa boky iray ity izay mety tsy ho voavakiko mihitsy, ka nandany vola be izany. ”
Wayne dia mamantatra ny fiainany taloha niaina niaraka tamin'ny vehivavy tao anaty akanjo lava ary lehilahy iray antsoina hoe Fred Vanderbilt
“Na izany aza, nony alina iny dia nanonofy aho fa tsy maintsy mamaky an'ity boky vaovao ity. Tsy afaka natory aho noho io hevitra manjavozavo io, dia nidina tany ambany aho ary nanokatra ilay boky. Tamin'ny voalohany tsy nisy nahasarika ny eritreritro fa tsy ela dia nanokatra pejy iray izay tsy nampoiziko.
Ny loko feno dia sary avy amin'ilay efitrano izay efa noraisiko ho toy ny ankizy foana. Ny valindanitra miavaka, ny afobe sy ny marbra fotsy ary ireo efitrano misy ahy dia tadidiko mazava tsara. Ny zava-drehetra dia tahaka ny hoe vao omaly aho no niala tao amin'io efitrano io.
Ny pejy manaraka dia miharihary kokoa. Indray, tao anaty loko sary, ny tranom-birao / biraoko no fantatro tsara. Ny sofina maitso manjelanjelatra izay nafenin'i Fred nandritra ny hetsika ara-tsosialy sy ireo latabatra tsara tarehy izay tao anatin'ny fandaharam-potoany. Nandinihana ny fahagagana aho, nieritreritra momba ilay hafetsena hafahafa nananako tamin'ity sehatra ity sy ny zavatra azoko ianarana avy amin'ity traikefa miavaka ity.
Nanomboka namaky ilay lahatsoratra izay nandeha niaraka tamin'ireo sary aho. Ny efitrano dia tao amin'ny Vanderbilt Mansion, izay naorin'i Frederick Vanderbilt tao Hyde Park, New York tamin'ny faramparan'ny taona 1800. Tsy kisendrasendra hafahafa ve izany, hoy aho, raha toa ka manana vady antsoina hoe Louise ity Fred Vanderbilt ity? Rehefa namaky ilay pejy aho, dia kivy be rehefa namaky fa nanambady i Frederick Louise Anthony. Ny pejy manaraka dia naharihary indrindra, indrindra rehefa hitako ny sary miloko nanaraka… Ny sary dia namelona ireo efitrano izay tadidiko tamin'ny fahatsiarovako voalohany indrindra tamin'ny fahazazako. Tsapako fa nanokatra boky iray aho izay nanambara ny tsiambaratelo rehetra tamin'ny fiainana taloha. ”
Toro-saina ara-panahy na fanahy: Fahatsiarovana ara-jeografika ao amin'ny Onjampeo fahadimy
Namaky ihany koa i Wayne fa na dia ny tranoben'izy ireo Hyde Park (sary eo akaikin'ny tampon'ity pejy ity) no tiany, ny tranon'izy ireo dia ny Fifth Avenue, New York City. Na dia rava ity trano tao NYC ity, ny toerana niainan'i Wayne ny "Louise" niainany tao amin'ny Park Avenue fony izy mbola tovolahy ary ilay toerana nisy ilay trano Vanderbilt teo amin'ny Fifth Avenue. Ny zava-misy niainan'i Louise Vanderbilt tao amin'ny Fifth Avenue dia manome fanazavana bebe kokoa momba ny zavatra niainan'i Wayne tanora tao amin'ny Fifth Avenue, rehefa niantso ilay hoe “Louise” ilay vehivavy antitra nanao fonon-tànana fotsy ary i Wayne dia nentina tany amin'ny nofo taloha lasa Louise.
Miantso ity toe-javatra ity aho eo amin'ny sehatra ara-jeografika izay mahatonga ny traikefa niainan'ny fiainana taloha toy ny Memory Geographic, izay hita ihany koa ao amin'ny: Trangam-panjakan'izao tontolo izao an'i John B. Gordon | Jeff Keene
Wayne Peterson sy Louise Vanderbilt dia liana amin'ny metafizika
Fantatr'i Wayne ihany koa fa tena liana tamin'ny metafizika i Louise sy Frederick, anisan'izany i Theosophy, toa an'i Wayne tamin'ny vanim-potoana ankehitriny. Amin'ny fahatongavany ho nofo ankehitriny, Wayne dia manam-pahaizana momba ny sanganasan'i Alice Bailey. Louise koa dia mpankafy mahafinaritra ireo andriambavilanitra tamin'ny taonjato faha-18 tany Frantsa, indrindra fa i Marie Antoinette. I Louise Vanderbilt aza nameno fanaka frantsay tamin'ny fananganana azy mihitsy.
Izany dia manan-danja amin'ny fifandraisany amin'ny fiainany taloha izay fantatra amin'ny Wayne, ny an'i Claude Ledoux, izay mpanakanto sy architekte mifandraika amin'ny lapan'i Louis XVI sy Marie Antoinette. Ny Claude Ledoux | Ny raharaha Wayne Peterson momba ny firaisana dia hita ao ateraka indray. Maty tao 1926, any Paris, i Louise, izay iray amin'ireo tanàna tiany indrindra. I Frederick dia niaina nandritra ny taona sisa tavela amin'ny ankapobeny, mandalo amin'ny 1938.
Fredrick Vanderbilt niorenany tamin'ny andron'ny Contemporary Times
I Frederick, eny an-dalana, dia fantatra ihany koa amin'izao vanim-potoana izao. I Fred dia lasa namana izay fantatr'i Wayne Peterson nandritra ny taona maro, izay miara-miasa amin'ny Wayne mahaliana amin'ny metaphysika. Na dia fantatr'i Wayne nandritra ny fotoana maromaro io olona io, dia tsy voafaritra hatramin'ny taona 2004 ny maha-izy azy an'i Frederick Vanderbilt. Tamin'izany fotoana izany dia nivory indray i Frederick sy Louise Vanderbilt, taona 78 taorian'ny nisarahan'izy ireo ny fahafatesana.
Ny singa manan-danja amin'io tranga io dia ahitana ny fahatsiarovan'i Wayne tamin'ny fahazazany nandritra ny androm-piainan'ny vehivavy izay nitondran'ireo vehivavy akanjo tamin'ny taon-jato faha-XVIII sy izay nisy ny lanonana natao tao anaty fasika lehibe iray, trano maoderina. Taty aoriana, tamin'ny fahatanorany, i Wayne dia nahatsiaro ny ho lasa vehivavy antsoina hoe Louise, izay nipoitra tamin'ny toerana nijoroany teo amin'ny toerana izay nipetrahan'i Louise sy Fredrick Vanderbilt tao amin'ny Fifth Avenue any New York. Na dia toa zava-mahagaga aza io fisehoan-javatra io tamin'ny voalohany, dia azo inoana fa io orinasam-pitaovana io dia natsangan'ny fanahy, na angamba ny an'i Wayne.
Ny tari-dàlana momba ny toerana ara-jeografika iray taloha, izay nahatonga ny nahita ny fiainany taloha, dia nitranga ihany koa tamin'ny tranga Trangam-panjakan'izao tontolo izao an'i John B. Gordon | Jeff Keene.
Ny tari-dalan'ny fanahy dia mbola miharihary kokoa amin'ny sehatra ao amin'ny trano fivarotam-boky, izay nanosika matetika ny bokim-boky iray tao amin'ny fivorian'ny bokikely. Rehefa naka io boky io i Wayne, dia tsy afaka namoaka izany izy, izay nitarika azy nividy ity boky ity tamin'ny tranon'ny taona faha-19 nanohitra ny sitrapony. Ao amin'io boky io, i Wayne dia nahita ny trano sy efitrano izay hitany tsara tao amin'ny fahatsiarovany fony izy zaza. Ny tranona dia an'i Fred sy Louise Vanderbilt, izay nahafahan'i Wayne hamaha ny piozila efa ela izay efa niady hatramin'ny fahazazany.
Raha ny fanamarihana, ity tranga ity, raha ekena, dia mampiseho fa ny fiovan'ny lahy dia afaka miova avy amin'ny fampodiana amin'ny iray hafa, na dia ny endriky ny endrika aza, ny taolana amin'ny endriny, dia mitoetra tsy miova.
Raha toa ka mampiseho ireo endritra manaraka ireto ity tranga ity:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endrik'i Wayne dia mifanaraka amin'ny an'i Louise Vanderbilt, na eo aza ny fiovan'ny lahy sy ny vavy.
Reincarnation & Change of Gender: Vehivavy i Louise, izay niorina indray tamin'ny hoe Wayne, lehilahy.
Reincarnation & Memory Geographic: I Wayne dia niaina ny fiainany taloha tao amin'ny Fifth Avenue izay nipetrahan'i Fred sy Louise Vanderbilt.
Fanahy ary fitarihana fanahy amin'ny tranga vatana vaovao: Ilay boky maritrano izay nanasongadina ny trano ao Vanderbilt Hyde Park, izay namela an'i Wayne hamaha ity raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ity indray, nifindra tamin'ny majika avy teo am-pivarotam-boky ary avy eo niraikitra tamin'ny tanan'i Wayne, izay nanery an'i Wayne hividy azy. Izy io dia maneho ny psychokinesis, izay ahalalana zavatra ara-batana amin'ny alàlan'ny fomba ara-tsaina, amin'ity tranga ity dia toa misy mpitarika fanahy. Psychokinesis dia misongadina amin'ny tranga fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ao amin'ny Daniel D. Home | Uri Geller, izay asongadina ao amin'ny ateraka indray. Nanosika an'i Wayne hamaky ilay boky ny nofin-dry zareo, tamin'ny misasak'alina.
Ankoatr'izay, ny tranga tao amin'ny Fifth Avenue izay nahitan'i Wayne fiverenana an-dàlam-piainana taloha dia mety natsangan'ny fanahy iray, na angamba tamin'ny fanahin'i Wayne ihany.
Reincarnation, talenta vao teraka & fitondran-tena taloha: Nianatra momba ny fanandroana sy ny literatiora Theosophical i Louise Vanderbilt. Wayne dia nanohy izany fahalianana izany tamin'ny nahatonga azy ho manam-pahaizana momba ny fitaovana Alice Bailey. Ankoatra izany, Wayne dia mpanoratra mpanoratra momba ny fanahy miaraka amin'ny bokiny, Fotoana hafahafa, zava-mahatalanjona.
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Hita fa nitambatra indray i Louise sy Frederick Vanderbilt tamin'ny alalan'ny famerenana amin'ny laoniny. Amin'izao vanim-potoana izao, samy lehilahy mpivady izy ireo, izay mpinamana tsy misy fandraisana anjara am-pitiavana.